फागुन २०, काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीवार साढे ३ प्रतिशतभन्दा बढीले बढीरहेको बजारमा पाँच ओटा कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । यो दिन २ बजेर ३० मिनेटको कारोबार अवधिसम्म चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड सहित पाँच ओटा कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च वृद्धि देखिएको हो ।
यो अवधिसम्म चार ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले र एउटा कम्पनीको ९ दशमलव ९४ प्रतिशतले बढेको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी माग रहेको चन्द्रागिरी हिल्स, किसान लघुवित्त, लिवर्टी इनर्जी र सूर्योदय लघुवित्तको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले बढेको हो भने नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको शेयरमूल्य ९ दशमलव ८४ प्रतिशतले बढेको हो ।
चन्द्रागिरी हिल्सको प्रतिशेयर रू. ५५ ले बढेर रू. ६०५, किसान लघुवित्तको प्रतिकित्ता रू. १४० ले बढेर रू. १ हजार ५४०, लिवर्टी इनर्जीको प्रतिकित्ता रू. २६ ले बढेर रू. २८६, सूर्योदय लघुवित्तको प्रतिकित्ता रू. १७६ ले बढेर रू. १ हजार ९३६ र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको प्रतिकित्ता रू. ५० ले बढेर रू. शेयरमूल्य ५५८ पुगेको छ ।